NY NOFO SY NY RA: – filazantsaramada
NY NOFO SY NY RA:
Publié parfilazantsaramada	 mars 13, 2015 mars 13, 2015 Laisser un commentaire sur NY NOFO SY NY RA:
« Raha tsy mihinana ny nofon’ny Zanak’olona sy misotro ny ràny hianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. » Jaona 6:53
– Mihinana ny nofo: tena sarotra dia sarotra ny mihevitra hoe mihinana nofon’olombelona, satria mihinana ny nofon’i Kristy no resahina eto, i Kristy izay tena olombelona, koa raha resahina eto dia mihinana olona ny mihinana ny nofon’i Kristy. Araka ny Filazantsaran’ny Jaona 1:14 dia milaza hoe ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika, izay hanambaràna an’i Kristy, dia Izy Ilay Teny tonga nofo, koa raha manambara ny fihinanana an’i Kristy dia mety azo raisina koa hoe
fihinanana ny Teny izay ambara eto amin’ny Jaona1 ity. Azontsika jerena amin’izany koa ny ao amin’ny boky Ezekiela 3:3 » Ary hoy Izy tamiko: ry zanak’olona, vokiso ny kibonao, ary fenoy ity horonan-taratasy omeko anao ity ny tsinainao. Dia nihinana aho, ka, mamy tao ambavako toy ny tantely izy. » Ny horonan-taratasy dia mirakitra ny Teny, dia Ilay Teny tonga nofo, ary mamy toy ny tantely no hanambarana azy. Ny mihinana ny nofon’i Krsity dia fihinana ny teniny, ambara hoe mamay toy ny tantely, ary maro ny teny milaza ao amin’ny Baiboly ny amin’ny Teny mitarika antsika ho amin’ny finoana, manome antsika ny Fiainana mandrakizay.
– Misotro ny ran’i Kristy: ny misotro ny rà indray, mety ho azo raisina ihany hoe azo sotroina; fa inona no entin’ny fisotroana ny rà. Raha ny Ràn’i Kristy dia manambara ny Ràn’ny zanak’ondry tsy misy kilema izay novonoina tamin’ny Zanak’Isiraely andeha hiala an’i Egypta, ary nafafy teny amin’ny tolanam-baravarana izany ka niditra tao antrano ny fahafatesana. Ny Ràn’ny Zanak’ondry tsy misy kilema dia ny ran’i Kristy Ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao.
Manao ahoana ny fanandramantsika ny Tenin’Andriamanitra? Efa mba mahita tsirony ny amin’ny famakiana na fihainoana ny tenin’Andriamanitra izany ve isika? Efa nahatsiaro ny hamaminy ve isika? Ny ambaran’ny Soratra Masina dia tokony ho toy ny tantely ny tsirony: mamy toy ny tantely! Raha mbola malaina hihaino ny tenin’Andriamanitra isika, na maharitraritra elaela kely ny Toriteny any ampiangonana dia tsy zakantsika, dia marina ny voalaza eto hoe tsy manana fiainana isika ao amintsika! Ny dikan’izany dia mbola hoe: very isika, very any amin’ny fahaverezana mandrakizay! Manao ahoana koa ny fandraisantsika ny famelan-keloka izay omen’i Jesosy Kristy rehefa nanota isika. Efa mba nandray ny ran’i Kristy ve isika ho fanadiovana antsika, ka tonga zanak’Andriamanitra koa? Mahatsiaro ho tena zanak’Andriamanitra ve ianao? Fa raha efa nodiovin’ny ràn’i Krsisty ianao dia tena tonga zanak’Andriamanitra. Maro ny zavatra nanakana antsika tsy ho tia ny tenin’Andriamanitra, tsy mba nahatsiaro ny hasarobidin’ny nanoloran’i Kristy ny ràny ho fanadiovana antsika isika, ka mionona amin’ny fahafatesana mandrakizay! Andeha isika, dieny mbola eo akaikintsika ny Tompo, afaka miantso ny Anarany isika, fa hamonjy dia hamonjy antsika tokoa Izy!
Hampahery antsika anie ny Tompo!
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Publié parfilazantsaramada mars 13, 2015 mars 13, 2015 Publié dansUncategorized
Club Feon’ny Filazantsara, Lycée Nanisana
Fiaraha-miombon’antoka Fitandremana Toby Betesda Ambohibao/ Feon’ny Filazantsara.